Iphrojekthi ye-Lavon Lake Dredging Ingeza eNyakatho Nezifo Zamanzi ZaseNorth Texas
Iphrojekthi ye-Lavon Lake dredging ingeza ekunikezelweni kwamanzi eNorth Texas
Noma nje isomiso siqhubeka futhi siqina esifundeni sonke, iSifunda Samanzi Somasipala saseNorth Texas sizoqala ukudiliza izindawo ezimbili zedamu laso elibalulekile ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, sivumele ukusetshenziswa kukhuphula ukulethwa kwamanzi kuze kube ngamalitha ayizigidi ezingama-7.2 ngosuku. An I-Ellicott 370 Dragon dredge iyasetshenziselwa le phrojekthi.
Iphrojekthi engu- $ 1.9 million izosusa cishe amamitha ayi-10 aqoqiwe cishe zombili zamapayipi wokudla amanzi eLavon Lake, kusho okhulumela lesi sifunda uDenise Hickey.
Izinga lamanje lamanzi eLavon limayelana nezinyawo ze-480 ngaphezu kolwandle. Kepha phakathi kokushisa kwehlobo, izinga lingawa nge-5 liye ezinyaweni ze-10 ngokusebenzisa ukusetshenziswa okwandisiwe nokuhwamuka. Uma izinga lechibi liwela ezinyaweni ze-469, i-Raw Water Pump 3 ngeke isakwazi ukupompela amanzi echibini, kusho uHickey; ezinyaweni ze-470, i-Raw Water Pump 2 ibizoba sesimweni esifanayo.
"Lezi zingukuphakanyiswa okubucayi," kusho yena.
Okuwukuphela kwekhambi elikhona-ke kungaba ukuletha amaphampu amakhulu futhi uwafake ezingxenyeni ezijulile zechibi ukugcina amanzi egeleza kumakhasimende wesifundazwe we-1.6 wezigidi, kusho uHickey.
“Usazothola amanzi,” kusho yena, “kodwa akuyona indlela engcono.”
Isifunda samanzi sigunyaze iphrojekthi yokudonsisa amanzi kule nyanga futhi yalela osonkontileka ukuthi baqale ukusebenza zingakapheli izinsuku ze-60, wathi, kanti iDredge America ihlose ukuqala ngokushesha ngangokunokwenzeka.
"Kufanele benze konke ukubukwa, balungiselele konke," kusho uHickey. “Ukuqonda kwami ​​ukuthi kunezingcezu ezimbalwa kakhulu zemishini yokudonsa etholakalayo. Futhi izinga lechibi kufanele libe phansi ngokwanele ukuba lisebenze. Uma sithola imvula eningi [ekuqaleni kwentwasahlobo], kwenza kube nzima ukusebenza. ”
Njengamanje, i-Dredge America ihlela ukuqala ukusebenza ngesonto lika-Mashi 9, kusho uHickey, futhi ukubhekelwa phansi komhlaba kufanele kube kusendaweni yokuphela kukaFebhuwari.
Isifunda senza umsebenzi ofanayo endaweni yokugcina amanzi okwesibili, iphrojekthi eyizigidi ezingama- $ 1.8 eJim Chapman Lake, enikezela isifunda saseNorth Texas Municipal Water District kanye nedolobha lase-Irving ngamanzi.
"UChapman kufanele aqedwe kwesinye isikhathi ngasekupheleni kwehlobo," kusho uHickey.
Iminyaka emihlanu yesimo sesomiso iveze imfucuza ebanzi yesihlabathi esomile ngasemaphethelweni kaLavon kanye neziteshi ezihlwitha zamanzi ajulile echibini eliphansi echibini laseLavon. Kepha ukwethula iphrojekthi ebanzi yokudonsela phansi ekujuleni kulo lonke ichibi kudala izinkinga ezinkulu zemvelo.
Lapho isifunda sibala ezinye izinombolo ngesimo sesomiso e-2005-2007, ukuzama ukukhuphula izinga lechibi bekungakhipha imfucuza eyanele "ukumboza yonke indawo yeRockwall County ezindaweni eziphakeme ze-3," kusho uHickey.
"Futhi izindleko bezizophakama izikhathi ze-20 kunokusebenzisa eminye imithombo yethu yamanzi."
Source: Izindaba zeDallas Morning